Borosy Style Retro ho an'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Jorge Neira | | borosy, dia midika hoe
La lamaody Retro Izy io dia iray amin'ireo fironana tadidy indrindra ankehitriny ary ny hoe na eo aza ny fiovana lehibe niaretana dia azo atao ny mahita olona firy no mahatadidy an'ity fotoana ity amin'ny nostalgia. Ary tsy natao ho an'ny kely kokoa izany, satria nandritra izany fotoana izany, ny fiainana nahazo fiovana lehibe teo amin'ny sehatry ny kolontsaina, noho ny fipoiran'ny mozikan'ny taona 70-80, izay tarika nanamarika ny fiainan'ny olona tsy tambo isaina.
1 Borosy borosy ho an'ny Photoshop
1.1 Fiara taloha
1.2 Sekoly taloha
1.3 Endrika mpizahatany
1.4 Doka omaly
1.5 Bika boribory
1.6 Sarintany taloha
Borosy borosy ho an'ny Photoshop
Amin'ity lahatsoratra ity dia te hampahafantatra anao ny sasany izahay borosy Retro, izay ilay mpampiasa azonao ampiasaina rehefa manao ny sarinao, anisan'izany, lamaody Retro no mahery setra amin'ny teny manodidina.
Ireo borosy ireo dia maneho ny ankamaroan'ireo singa izay ho an'ny vanim-potoana Retro dia anisan'ny kolontsaina mihitsy, noho io antony io ampahany lehibe amin'ny borosy dia haseho amin'ny fironana sasany ary tamin'ny taona 90 dia izy ireo no fironana lehibe tamin'ny firenena maro.
Fiara dia ampahany tamin'ny fiainantsika tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX. Ity borosy ity dia misy a fanangonana ireo maodely rehetra ireo, izay ankehitriny no tandindon'ny vanim-potoana Retro tamin'ny taona 90 (Fotoana nanombohan'ny lamaody Retro naneho fahaiza-manao lehibe).
Ny zavatra tsara indrindra amin'izany rehetra izany dia izany ny retro dia mbola anisany tsena marobe Ary ao anatin'izany ireo karazan-fiara ireo, noho izany, ny fiotazam-boaloboka dia manana solontena voafaritra tsara raha resaka Retro.
Ny fe-potoana "Sekoly taloha", Matetika dia manondro ireo fanao rehetra izay tao anatin'ny repertoire nifanaovan'ireo izay niaina tamin'ny taonan'ny volamena taloha.
Ka "sekoly taloha" angamba no mozika omaly, lalao omaly, fomba sy fitafiana omaly… Etc., Miaraka amin'ireo singa an'ohatra maro izay mety ho hitantsika ao anatin'ny "Sekolin'ny Taloha".
Ity kilasin'ny borosy ity dia manondro ireo endrika fiainana rehetra ireo izay nanombanana ny fiainana ho avy, izany hoe ilay hodinihintsika ankehitriny ny ankehitriny ary ny fiainantsika ankehitriny dia mety hitovy amin'ny toe-javatra sasany izay noheverina fa hoavin'ny ho avy. Na ny sasany aza fanehoana an'io fironana io izy ireo dia azo kintana amin'ny sarimihetsika toy ny tamin'ny ho avy, na koa Terminator ... sns.
Io fironana io manambatra ireo marika rehetra ireo izay tao anatin'ny doka sasany izany dia tsy ho hita tamin'ny fahitalavitra ihany. Toy izany koa, azo atao ihany koa ny mankasitraka ireo fomba an'arivony maro izay nampiasan'ny orinasa toy ny fomba fanaovana dokambarotra ny marika.
Ny boribory dia anisan'ny fomba maro tamin'ny taona 60, izay tetik'asa firaketana karazana rock maro niteraka fironana lehibe ho an'ity fomba ity izy ireoAmin'izany fomba izany no ahafahantsika mahita karazana fanehoana kolontsaina isan-karazany, izay anisany ny seho aseho ny faribolana.
Ireo sarintany taloha dia ilaina amin'ny vanim-potoana Retro. Na dia maro aza no tsy mahalala an'io, ny sari-tany taloha dia tena fahita any amin'ny efi-trano na orinasa sasany, amin'ny fomba azo atao ny mahita ny sarintany rehetra na aiza na aiza. Ary ny ampahan'ny fanao dia ny mametraka azy ireo amin'ny rindrina mba ho hitan'ny tsirairay.
Misy maromaro borosy azon'ny mpampiasa atao mba hisafidianana ny asany rehetra eo ambanin'ny tontolon'ny lamaody Retro ary samy manondro fironana manokana izy ireo, saingy zavatra iray ihany no iarahan'izy rehetra milaza: kolontsaina Retro.
Io lamaody io dia mety hisy, iray amin'ireo fotoana manan-danja indrindra amin'ny fiainana ho an'ny olona maro ary izany dia azo lazaina ho antony maro. Fa amin'izany rehetra izany, lamaody Retro no nahavita ny vokany maharitra amin'ny fiainan'ny olona maro, amin'ny fomba toy izany, dia afaka mahatsapa ny lamaody maro misy isika ankehitriny noho ny vanim-potoana retro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Borosy Style Retro ho an'ny Adobe Photoshop